C/kariin Xuseen Guuleed oo lagu eedeeyay in uu lug ku lahaa Dagaalkii dhawaan ka dhacay Gobolka Sh/Hoose | Salaan Media
Mas’uuliyiin iyo Nabadoono ka soo jeeda Beesha Biiyomaal, ayaa sheegay in Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha Somalia C/kariin Xuseen Guuleed kadib markii ay soo bandhigeen Sir badan ay ku qarinayeen intii uu socday Dagaalkii maalmahaani ka socday Gobolka Shabeellaha Hoose.
Aqoon yahaan ka soo jeeda Beesha Biiyomaal Xassan C/llahi Cali oo ku sugan Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa sheegay in Wasiirku uu hub geeyay Gobolka Shabeellaha Hoose Hubkaasi oo loo geeyay Ciiddamadii Habar Gidir ee la dagaalamaayay kuwa Beesha Biimaal.
‘’Wasiirka Arrimaha Gudaha waxa uu Gobolka Shabeellaha Hoose keenay Hub farabadan oo loo qeybiyay Ciiddamo ka soo jeeda Beesha Habar Gidir, waxaa nasiib daro ah in Xukuumadda ay beel-beel ula safato Ciiddamadda, Hubkii uu keenay Wasiirka waxaa lagu keenay Gawaadhi ay la socdeen Ciiddamadda Dowladda lkn waxa ay ahaayen Ciidamo hal Beel ah’’ Ayuu yidhi Aqoon yahaanka.
Dhanka kale, Ugaas Axmed Ugaas Sayid Cali Ugaas Xuseen, oo ah Ugaaska Beesha Biiyomaal, ayaa waxa uu sheegay in Dagaalkii ka dhacay Gobalka uu salfaday Ciiddamo iyo Shacab badan, Mas’uuliyada dhiigaasi daatayna waxaa iskaleh Wasiirka Arrimaha Gudaha Iyo Amniga Qaranka Somalia, sida uu hadalka u dhigay.
‘’Wasiirka waxa uu si cad oo aan gambasho laheyn ula saftay Beesha Habar Gidir, waxa uuna Gobalka geeyay Hub uu u qeybiyay Beeshiisa’’ Ayuu yidhi Ugaasku.
Ugu dambeyntii, Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa waxaa lagu eedeeyay in Dagaalka iyo Colaadaha ka taagan Shabeellaha Hoose uu isaga sii huriyay, Inkastuu uu beeniyay eedeemaha loo soo jeediyay Wasiirka.